News and Notices | Arjundhara Municipality
Read more about कोभिड-१९ विरुद्धको १८ वर्षदेखि माथिका सबैलाई पहिलो, दोश्रो र बुष्टर डोज खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
Read more about सहकारी संस्थाहरुको आ.व. ०७७/०७८ को पेश गर्न बाँकी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना ।
Read more about माछा पकेट कार्यक्रममा छनौट भएको सूचना ।
Read more about सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।
Read more about टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धि सूचना ।
Read more about प्राकृतिक जरुवा पैनी तथा साना सिंचाई कार्यक्रम सम्झौता बारेको सूचना ।
Read more about अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ०५ बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवारमुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
Read more about लागत साझेदारीमा घांसको वीउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।
Read more about किसान सूचिकरण सहजकर्ता कार्यक्रमको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना ।
Read more about अन्तरवार्ताका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
Read more about कोभिड १९ विरुद्दको बुस्टर डोज खोप सञ्चालन हुने बारे ।